Welding - umshini wokushisa umshini wokungenisa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
Ukuhlanganisa i-Metal ne-Brazing ne-Welding Kunezindlela eziningi zokuhlanganisa izinsimbi, kufaka phakathi i-welding, i-brazing ne-soldering. Uyini umehluko phakathi kokushisela nokubopha? Uyini umehluko phakathi kokubopha nokufaka i-soldering? Ake sihlole umehluko kanye nezinzuzo zokuqhathanisa kanye nezicelo ezijwayelekile. Le ngxoxo izokujulisa ukuqonda kwakho kwensimbi… Funda kabanzi
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ukugqolozela, ilunga lokubhonqa, umsebenzi wokubhrasha kanjani, isebenza kanjani i-welding, i-induction brazing metal, i-induction jointing yensimbi, ukuhlanganisa ukubopha, ukuhlanganisa i-welding, ukubopha insimbi, isifudumezi sensimbi, i-iron induction brazing, Welding yensimbi, i-metal welding heater, welding
Kuyini ukukhishwa kwe-induction?
Ngokufakwa kwe-induction ukushisa kufakwa ngogesi ku-workpiece. Ijubane nokunemba
Welding induction yenza kube kuhle ekushiseni komphetho kwamashubhu namapayipi. Kule nqubo, amapayipi adlulisa ikhoyili yokungeniswa ngejubane elikhulu. Njengoba benza kanjalo, imiphetho yabo iyashiswa bese iyakhanywa ndawonye ukuze yakhe umsila we-weld longitudinal. Ukushiswa kwe-induction kufanelekile ikakhulukazi ekukhiqizeni okuphezulu. Ama-welding wokungeniswa nawo angafakwa emakhanda oxhumana nawo, uwaguqule abe
izinhlelo ezimbili zokulanda izinhloso.
Ukushisela okuzenzakalelayo kwe-induction okuzenzakalelayo kuyinkqubo ethembekile, ephezulu kakhulu. Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi nokusebenza kahle kwezinhlelo zokushisela ze-DAWEI kunciphisa izindleko. Ukulawulwa kwabo nokuphindeka kwabo kunciphisa udoti. Amasistimu ethu abuye aguquguquke — ukufaniswa kokulayishwa okuzenzakalelayo kuqinisekisa amandla okukhipha okugcwele kububanzi obuhlukahlukene bamashubhu. Futhi ukunyathela kwabo okuncane kwenza kube lula ukuhlanganisa noma ukuphinda kwenziwe kabusha emigqeni yokukhiqiza.
Kuphi lapho kusetshenziswa khona?
I-induction welding isetshenziswa embonini yethubhu nepayipi ekushiseni kwe-longitudinal yensimbi engagqwali (magnetic futhi non-magnetic), i-aluminium, i-low-carbon ne-highstrength low-alloy (HSLA) steels nezinye izinto eziningi ezihamba kahle
Izigaba Imibuzo Evame Ukubuzwa Amathegi ukuphakama kwezinga eliphezulu, ukukhishwa kwe-induction, inqubo yokudonsa induction, ukudonsa imvamisa yomsakazo, welding, welding tube ithusi, welding tubing